Taliye Fadal waa Taliye La Mahadiyey,Xag-Xagasho Waxba Lagaga Qaadi Maayo.
August 19, 2019 9:22 pm in Highlights, Maqaalo. by admin.
Xildhibaan Maxamed Faarax Qabiile oo ka mid ah mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ayaa ku jira xildhibaanadda ugu liita eek u jira golaha kaasi oo marka aad qiimayso magaca uu sito sida uu yahay uu ku khasaare yahay magaca xildhibaan madaama oo aanu u qalmin xildhibaan.
Qabiile Waa kuma:-Somaliland intii ay jirtay waa la garanayaa intii dambi ee uu galay inta qof ee ay waxyeleen isaga iyo inamadiisuba,cida ay ciidamadda boolisku inuu nabadda wax yeleeyo ka ilaaliyaan waa qaabile.
Dareen ayaa ka galay oo mudo xileedkiisii ayaa soo gabaabsi ah sidaas darteed ayuu ugu tiraabayaa hadaladda aan meelna gaadhsiisnayn ee uu ku durayo Janaraal fadal.
Qabiilo mar dambe hadii uu hadal ka soo baxo waxaanu shacabka u soo bandhigi doonaa fadeexadahaagii kala duwanaa ee ay dabooli jireen ciidamadda booliska somaliland.
Xildhibaan Qabiile waxa ay shacabka Ka markhaati kacayaan xaaladdaha kala duwan ee uu galay mararka qaarkood taas oo muujinaysa eryadda ka soo baxay ee ku saabsan aflagaadda uu kula kacay ciidanka xurmadda iyo sharafta ka mudan qaranka somaliland?
Xildhibaanka waayo badan oo aanu saaxiibo dhaw ahayn maaha xildhibaan ee waa qof markaad waraysato aad ka dareemayso sida uu baro hore u dhaafay xayn daabka madaama oo uu yahay xildhibaanadda aan marna ka muuqan golaha inkastoo bulshadu aqoon ku xaman jirtay iyo inuu macalin ahaa haddana waxa loo malaynayaa in ay jiidhay aqoontii oo waxaad ka aragtaa korkiisa.
Xildhibaanka ayaa waxa uu aflagaado qaawan kula kacay taliyihii ciidanka booliska somaliland Ugu wax qabadka iyo aqoonta badnaa marka la eego xaga ciidan waana taliyaha kaliya ee ciidankiisa aqoon,hub iyo kartidooda kor u qaaday,waxaana kuu macalin ah sida ay hadh iyo habeen u soo qalin jabinayaa.
Hadalka Xildhibaanka waxa ka buuxay naxli iyo xumaan aan geedna loogu soo gaban oo uu soo diray taliyaha ciidanka miltaraiga oo bulshadda somaliland iyo ciidanka uu maamulaaba ay saluug ka muujiyeen,waxaana ay taasi markhaati ka tahay sida qabiilaysan ee uu u dhaliilayo taliyaha shaqadiisa qaranka iyo madaxwayne muuse biixiba ku qanceen.
Hogaaminta cabdilaahi fadal waata amaan ka dhigtay magaalooyinka waawayn ee somaliland Sida Hargaysa,Burco Berbera,Laas-caanood ceerigaabo oo magaalooyinka qaarkood barigii hore ciidan daaya magaca somaliland laga aqoon,taliye fadal waa taliye hayin ah oo bulshadyu mahadisay maahana mid lagu xag xagan karo.
Xildhibaanka aan aqoonta badan u lahayn ciidanka ee haddana afka ku taagaya waxa waajib ah in ciidanku sida sharciga ah u maraan madaama oo uu ka gudbay xayn-daabkii sharcigu u jideeyay dhaliilo indho isku qabad ahna u jeediyay ciidanka bulshadda iyo qarankuba mahadiyay.
Ciidanka booliska ee habeen iyo maalinba amaanka sugaya maaha in xildhibaan iyo qof yar oo shacab ahi dhaliilo malo awaal ah ay kula dul kufaan,waxaanse sheegayaa in qaranka somaliland u baahan yahay taliye cabdilaahi fadal.
Ciidanika booliska inta uu xilka hayay waxa ay hawl-galadda ay fulinayaa ku dabaqaan sharciga,waxaana ciidanka kor loo qaaday mooraalkooda oo ah in laga dhiso xaga aqoonta,waxaana ay taasi muujinaysaa sida taliye fadal ugu hamiyayo inuu ciidanka boolisku la talaabsado sida ciidanka caalamka.
Haddaba waxaanu leenahay taliye cidna waxba kaaga qaadi mayso cayda cuqdadu ka buuxdo ee aan meelna loo soo marin,taliye fadalna hore ayuu u socday oo ciidankuna wuu mahadiyay.
Farxaan cabdilaahi cabdi